Malunga nathi - iZaili zobunjineli boomatshini Co., Ltd.
IZaili zobunjineli boomatshini Co., Ltd.
Zaili Ubunjineli Oomatshini Co, Ltd. ngomnye wabavelisi bobuchwephesha bokuqhekeza ngesanti kubunzulu baphantsi, isikere se-hydraulic, i-hydraulic grapples, i-coupler ekhawulezayo kunye nesando semfumba. Ukujolisa kuphando, uphuhliso kunye nokuveliswa kwekhefu, inkampani yazise ngaphezulu kwe-30 iiseti zemveliso kunye nezixhobo zokuvavanya ukusuka ekhaya nakwamanye amazwe. Le nkampani iye inkqubo yemveliso ebanzi ezifana machining, uhlolo, ibandla, ukuvavanywa, ukupakisha njl usebenzisa iindlela zolawulo processing zangoku, iimveliso kufuneka iimpawu ezikumgangatho ophezulu, uzinzo eliphezulu, ubungcibi ephucukileyo nokuhlala ixesha elide, kwaye zamkelwe kakuhle ngabathengi ekhaya nakumazwe aphesheya.
Inkampani idlulisile umgangatho osemgangathweni we-ISO9001-2000 kunye ne-CE. Inenkqubo engqongqo yolawulo lomgangatho kunye nenkonzo egqibeleleyo emva kokuthengisa. Oko yasekwa, inkampani iseke ubuhlakani bexesha elide kunye neenkampani ezininzi zasekhaya nezaseKorea.
Inkampani yethu ibisoloko ibambelela kumoya weshishini "wobunye, ukusebenza nzima, ubuchule kunye nokwenziwa kwezinto ezintsha" kunye nefilosofi yeshishini "yokuthembeka, ukubekwa emgangathweni, ukusebenza ngokukuko kunye nozinzo". Ihlala inyanzelisa ukuba umdla wabathengi ungaphezulu kwayo yonke enye into, kwaye unqwenela ukuba ngumzi mveliso wobuchwephesha wokophula izando. "Wenze kakuhle umsebenzi kwaye wanelise abasebenzisi" yinto yethu engapheliyo!
Umoya weNkampani: nyamezela, zama ukugqibelela, gqithisa ukugqitha
Umbono wenkampani: ukuba ibe ngumenzi wezincedisi ezikhokelayo
Injongo: Ukuba ngumenzi ophambili wezando ze-hydraulic fracturing hammer
Ifilosofi yeshishini: isiseko esisekwe kwintembeko, ukuvelisa izinto ezintsha njengomphefumlo
Umgaqo-nkqubo womgangatho: ngenyameko, qhubeka uphucula, unikezela abathengi ngeemveliso ezisemgangathweni kunye neenkonzo ezonelisayo, ukuze inkqubo yolawulo lomgangatho weshishini iphuculwe ngokuqhubekekayo.
Cwaka Uhlobo Breaker, Uchebe Kuba Excavator, Hb Uthotho Breaker, Control Valve Breaker, Pulverizer Kuba Excavator, Isityumzi Excavator,